Onye isi oche na-asọpụrụ na-akwado na Honor V30 ga-abịa na nkwado 5G | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya, osote onye isi Xiaomi na onye isi oche nke Redmi, Lu Weibing, kwupụtara na ekwentị Redmi K30 nwere nkwado 5G ga-abụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ ga-amalite mgbe e mesịrị. N'oge na-adịghị anya mgbe akụkọ a gasịrị, Zhao Ming, Onye isi oche dị ebube, kwadoro na Weibo na na Honor V30 ga-abụ ngwaọrụ mbụ nwere nkwado maka 5G netwọkụ nke ika ahụ.
O gosiputala na ọ bụghị naanị Honor V30 ga-eji nkwado 5G dị mfe, mana ọ ga-adaba na 5G SA na NSA zuru oke, yana igwe eji arụ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị na-atụ anya na Honor na-esote 5G smartphone ga-akwado ya Kirin 990 processor site na ụlọ ọrụ maka arụmọrụ dị ike. Nyere kwuru SoC ga - ebido n'ime izu ole na oleAnyị na-atụ anya na a kwanyere Honor V30 na nke a, dịka a ga-eme ya n'oge na-adịghị anya, ekwesịrị ịdeba ya, mana n'ime ọnwa ole na ole. Ka anyị buru n'uche na Sọpụrụ V20 ebuputara ya na ahia na onwa Disemba nke afo gara aga.
Sọpụrụ V30 na 5G nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwadoro
Huaweilọ ọrụ nna nke Honor Huawei malitere ire 5G mbụ ya na obodo ya bụ China. Smart ekwentị Huawei Nwunye 20 X 5G Ọ dị ugbu a maka ịzụta na mba ahụ na-efu 6,199 yuan, nke na-aghọ ihe dịka $ 880 ma ọ bụ 780 euro.
Nke a na-abịa na 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa dị n'ime emerald green, yana ihuenyo 7.2 nke anụ ọhịa OLED na mkpebi FullHD + nke 2,240 x 1,080 pikselụ, octa-core processor Kirin 980 ya na Mali-G76 GPU. Na mgbakwunye, ọ na-eji igwefoto 40 MP + 8 MP + 20 MP nwere okpukpu atọ na onye na-agba egbe 24 MP maka selfies, oku vidiyo, ihu ihu na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Na-asọpụrụ President na-akwado Na-asọpụrụ V30 ga-abịa na 5G Nkwado
Enwere ike ịzụta OUKITEL C17 Pro ugbu a maka $ 84,99